Cilmi-nafsiga qoraalka: waxa uu yahay, sida loo soo bandhigo iyo astaamihiisa | Hal-abuurka khadka tooska ah
Dunida naqshadeynta, waxaan ku hareereysannahay shucuur iyo tibaaxo labadaba. Waxaa jira astaamo badan oo ujeedo iyo ujeedo ah oo sawirku noo soo gudbin karo. Taasi waa sababta, ma aha oo kaliya midabyo awood u leh inay noo sheegaan nooc ka mid ah koodka nooca shakhsi ahaaneed ee ay leeyihiin ama dabeecadda ay ku bixiyaan muuqaal dibadda ah.
Waxa kale oo jira waxyaabo kale oo ay ka mid yihiin xarfaha, kuwaas oo awood u leh in ay gudbiyaan dareeno kala duwan oo door ka ciyaara, labadaba naqshadeeyaha iyo daawadayaasha daawashada mashruuca, waa lagama maarmaan. Maqaalkan waxaan kuugu nimid inaan kaala hadalno sida xarfaha ay u saameeyaan dabeecadda Mashruuc gaar ah iyo sida ay mas'uul uga yihiin inay dhagaystayaasheenna dareemaan si la mid ah sida aan rabno inay dareemaan, taasna waxaa lagu magacaabaa cilmi-nafsiga qoraalka.
1 Waa maxay cilmi-nafsiga qoraalka?
2 Macnaha far kasta
2.2 san serif
2.3 gacan ku qoran
2.4 qurux badan ama qurxin
3 Farshaxannada ugu fiican
Waa maxay cilmi-nafsiga qoraalka?
Cilmi-nafsiga qoraalka Waxaa loo fahmay inay tahay daraasadda qoysaska kala duwan ee qoraalka iyo sida loogu muujiyo qaybta naqshadeynta garaafyada. Saamayntoodu aad bay u wayn tahay oo waxay u gudbin karaan shucuur iyo fikrado kala duwan labadaba kuwa arka iyo kuwa naqshadeeyayba.
Ololeyaal badan oo xayeysiis ah, qoraal-ku-qoris ayaa had iyo jeer door muhiim ah ka ciyaaray horumarintiisa. Hagaag, waxay noqon kartaa qaybta muhiimka ah ee cinwaan weyn oo soo koobaya dhammaan fariinta ololaha. Ololeyaal badan ayaa doortay in ay isticmaalaan qoraalka kaliya ee qaybta ugu muhiimsan, tani maaha wax la yaab leh, maadaama aan la ciyaari karno siyaabo badan iyo Kaliya marka lagu daro iyaga, daawadayaasha ayaa horey u ogaan doona gacantiisa koowaad waxa dareenka aan ka hadleyno.
Waxaa jira badeecooyin ama walxo badan oo kheyraadkan lagu isticmaalo, laakiin ololeyaal badan ayaa soo jiidanaya cabitaannada fudud ama silsiladaha cuntada degdega ah. Waxay yihiin xulashooyin wanaagsan oo lagu isticmaalo noocyadan xarfaha, sidaas darteed waxay noqon kartaa mid xiiso leh.
Waxay ka caawiyaan daawadayaasha inuusan lumin dunta mashruuca uu daawanayo. Yacni, waxa uu maareeyaa in uu gaadho nooc ka mid ah xariiqda iyo silsiladda dareenka iyo shucuurta oo dhigata meesha saxda ah ee saxda ah.
Waa curiye sidoo kale aad uga dhex muuqda qaybta aqoonsiga shirkadda. Marka aan naqshadeyno calaamad, waxaa muhiim ah in la ogaado nooca wajiyada ay noqon doonaan qayb ka mid ah summadayada, sababtoo ah waxay fahmi doonaan kala badh ama xitaa dhammaan dabeecadda iyo sida shirkadeena loo hagi doono loona soo bandhigi doono dadkeena.
cilmi-nafsiga xagga qoraalka, Waa wax sidoo kale aad ugu lug leh maalinteena maalinba maalinta ka dambeysa. Mar kasta oo aan eegno hareerahayaga, waxaynu ogaanaynaa ganacsiyada kala duwan ee u doortay cunsurkan inuu yahay shay muhiim u ah sawirkooda.
Waxa kale oo ay kaa caawinaysaa in aad rabto in aad wax kasta ku sheegto waxba, taas oo ah, adigoo dooranaya farta saxda ah ka dib markii la falanqeeyay, waxaan ku soo gabagabeyneynaa in aan wax walba ku dhihi karno wax yar. Waa sixirka shaqsiyaynta qoraallada.
Marka la soo koobo, waxaa jira astaamo badan oo mideeya cilmi-nafsiga qoraalka.
Macnaha far kasta
Qoraalka Serif Waxaa lagu gartaa inuu yahay farjiga ugu da'da weyn. Oo ma aha sababtoo ah waa kii hore u dhashay, laakiin sidoo kale. Haddii aysan ahayn sababtoo ah waa qoyskii ugu horreeyay ee la naqshadeeyay oo la abuuray. Macnuhu wuxuu soo taxnaa gaar ahaan waqtiyadii Roomaanka. Waqti dhagaxaan la isticmaali jiray oo far kasta la xardhay. Sababtan awgeed, waxaan u mahadcelin karnaa darbooyinka aadka loo calaamadeeyay ee ay fartan ku jiraan.
Nooca noocaan ah waxaa inta badan loo adeegsadaa gaar ahaan qoraallada dhaadheer, iyadoo ay ugu wacan tahay qaab-dhismeedkiisa. Caadi ahaan waxay leedahay muuqaal caadi ah oo si aad ah u tilmaamaya iyaga oo soo bandhigaya tibaaxo iyo dareeno ay ka mid yihiin halis. Waxay shaki la'aan ka yihiin mid ka mid ah far-qorista ugu rasmiga ah ee jira. Caadi ahaan waxay u adeegsadaan alaabooyin qani ah qiimahooda awgeed, sida cadarka, shokolaatada ama dahabka.
Xigasho: Daily Report
Sans serif fonts waa nooc ka mid ah farta, oo ka duwan xarfaha serifka, aan lahayn serifs jirkooda. Jiritaan la'aanta serifka ayaa ka dhigaysa in wejiyadan ay beddelaan muuqaalkooda waxaana loo tixgaliyaa oo loo tixgaliyaa inay yihiin kuwa ugu casrisan ee ugu tayada sarreeya.
Si ka duwan serifs, sans serifs inta badan waxaa loo adeegsadaa qoraallo waaweyn, sidaan oo kale waxay daboolayaan wadarta qoraal-hoosaadyada iyo cinwaannada bogga kuwaas oo si fiican isugu dara. Waxay isu soo bandhigaan qaab dhalinyaro ah, ma aha mid aad u culus, laakiin ilaalinta rasmiga ah iyo xirfad-yaqaannimada.
gacan ku qoran
Xigasho: Fikrad hal abuur leh
Farta gacanta lagu qoray waa kuwa lagu garto in gacan lagu naqshadeeyay. Si ka duwan kuwa kale, oo laga yaabo in si dhijitaal ah loo qaabeeyey, kuwani waxay ilaalinayaan naqshadda caadiga ah. Aad bay u fiican yihiin in la arko laakiin mararka qaarkood, aad bay u adagtahay in la akhriyo. Taasi waa sababta ay u yihiin xarfo loogu talagalay in lagu waafajiyo cinwaannada muhiimka ah ee aan loogu socon qoraallada.
Muuqaalkeeda waxay ka dhigan tahay in loo tixgeliyo mid ka mid ah wejiyada nooca leh hawo heersare ah oo mugdi ah. Intaa waxaa dheer, waxaa sidoo kale loo adeegsaday qaybo kala duwan sababtoo ah muuqaalkooda halista ah iyo kuwa rasmiga ah. Tusaalaha aadka u caansan ayaa shaki la'aan noqon doona qaybta khamriga ama cadarka. Xitaa noocyada shukulaatada qiimaha sare leh waxay doorteen isticmaalka noocyadan noocyada xarfaha calaamadahooda in la magacaabo mid ka mid ah alaabadooda.
Marka la soo koobo, waxay yihiin nooca ugu fiican ee font si loogu daro mashaariicdaada ugu xirfada badan iyo kuwa culus.
qurux badan ama qurxin
Wajiyada noocaan ah waxaa lagu gartaa qaababkooda, waxay soo bandhigaan qaabab shaqsiyeysan oo hal abuur leh, oo lagu dejiyay sheekooyinka Disney, sidaas awgeed calaamadda Disney waxaa loogu talagalay qaab-qurxinta. Badanaa waa nooca wax-ku-qorista ee leh hal-abuurnimada ugu hal-abuurka iyo farshaxanka badan, maadaama aan loogu talagelin qoraallada ordaya ee yaryar balse loogu talagalay cinwaannada waaweyn.
Noocyo badan ayaa sidoo kale doortay naqshadaynta qoraalkan, mana ahan wax la yaab leh, maadaama ay yihiin kuwo aad u hal abuur leh, waxay u muuqdaan inay soo jiidanayaan dareen badan, daawadayaashana waxay u muuqdaan inay si fudud u xasuusan karaan. Marka la soo koobo, waa ikhtiyaarka ugu fiican haddii aad raadineyso wax ka firfircoon.
Farshaxannada ugu fiican
Wajiga nooca Bodoni waa la qoray sida mid ka mid ah xarfaha serif-ka ee aadka loo isticmaalo ee naqshadeeyayaasha iyo naqshadeeyayaasha aduunka oo dhan. Caannimadeeda ayaa gaadhay noocyo badan oo la istcimaalo taas oo aan caadi ahayn in lagu arko qaar ka mid ah xarumaha ugu fiican, menu-yada makhaayadaha ama noocyada cuntada.
Shaki la'aan waa mid ka mid ah wejiyada serifka in aad codsan karto haddii aad raadinayso mid daran iyo demure. Qaabkeeda caadiga ah iyo qaabka demure ayaa ka dhigaya mid ka mid ah wajiyada nooca ugu raaxada iyo quruxda badan, iyo sidoo kale qumman.
Futura waa wejiga nooca xiddigga 80% ee naqshadeeyayaasha ka shaqeeya summadaha ama naqshadeynta tifaftirka. Hal abuurkeeda Paul Renner, mid ka mid ah naqshadeeyayaasha garaafyada ugu muhiimsan taariikhda iyo adduunka oo dhan. Wajiga noocaan ah waxaa loo tixgaliyaa sidii weji nooca sans-serif ah, kaas oo muuqaalkiisa lagu garto istarooggiisa joomatari ee caadiga ah iyo kuwa fudud, iyo istaroogga toosan ee qumman ee ay leeyihiin. Waa nooca ugu habboon ee nooc kasta oo qoraal ah, hadday tahay madax, qoraal ordaya ama cinwaan.
Intaa waxaa dheer, noocyo badan ayaa sidoo kale ku biiray nooca noocaan ah oo leh muuqaal aad u da 'yar oo hadda jira, oo ah wakhtiga caadiga ah.
Qof kasta oo u heellan naqshadaynta waa inuu si hubaal ah u yaqaan qoraalkan. Waxaa soo saaray naqshadeeye Max Miedinger sannadkii 1957kii magaceeduna waxa uu soo saaray qof dumar ah oo ka soo jeeda waayihii qadiimiga ahaa ee wadamada sida Switzerland.
Ma ahan wax la filan karo in mudanahan uu naqshadeeyay mid ka mid ah wejiyada matalayaasha ugu badan ee naqshadeynta garaafka, guud ahaan taariikhda naqshadeynta garaafyada. Waxa lagu gartaa qoraalkan wax badan ayaa ah qaababkiisa, waxa kale oo ay soo bandhigtaa qaabab joomatari oo ka dhigaya mid aad u xiiso badan. Dhab ahaantii waa ikhtiyaarka ugu fiican.
Doorashadayada ugu dambaysa shaki la'aan waa nooca loo yaqaan 'Rockwell typeface', nooca noocaan ah waxaa si gaar ah loogu talagalay cinwaannada. La yaabna ma aha in aan ku aragnay iyada oo ku dul dhejisa boodhadhka filimada ugu fiican, tan iyo boodhka filimka ee feerka Rocky, waxa ay ku xardhan tahay ciwaanka filimkiisa.
Waxa aan shaki ku jirin in uu yahay qoraal tilmaamaya xoog iyo awood, muuqiisa dhumucdiisuna waxa uu ka dhigayaa mid ka muuqda mayl fog, sidaa awgeed waxa uu isla markiiba la jaan qaadayaa goob-aragtiyeedka aragtida. Shaki la'aan waa nooca ugu fiican ee cinwaannadaada, iyo nooca ugu habboon sidoo kale soo jiidashada dareenka.
Cilmi-nafsiga qoraalku waa daraasad maanta u adeegta aasaaska bilowga ah ee fahamka adeegsigiisa iyo ujeeddadiisa. Taasi waa sababta ay muhiim u tahay in la ogaado oo la ogaado qoraalkeena gebi ahaanba. Mar kasta oo aad samaynayso sumad, falanqayn qoraaladaada marka hore, ma aha oo kaliya kuwa aad dooranayso, laakiin kuwa kale waxaad haysataa sawir-gacmeed ahaan.
Marka la soo koobo, waa daraasad ka caawisay naqshadeeyayaal badan oo adduunka oo dhan ka yimid si ay u bartaan oo ay wax badan uga bartaan adduunka qoraalka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » cilmi-nafsiga qoraalka